Classic Plastic Tuber Garden Bird feeder - China Richina
Basic Info Model No.: HF249 Color: Customized OEM/ODM: Welcome Capacity: 600ML Feeding Stations: 3 Material: PP+ABS Hanger: Steel Additional Info Packaging: 24pcs/carton Productivity: 3000000/month Brand: RHE Transportation: Ocean,Land,Air Place of Origin: China Supply Ability: 3000000/month Certificate: BSCI Port: Ningbo,Shanghai Product Description Classic Tube Bird Feeder,Feed and watch wild birds in ...
Ịdị No .: HF249
Nri Stations: 3
Ihe: eyi + ABS
Packaging: 24pcs / katọn
Arụpụtaghị: 3000000 / ọnwa
Tụkwasịnụ Ikike: 3000000 / ọnwa
Classic tube Bird feeder , Nri ma na-ekiri ọhịa nnụnụ na gị onwe gị n'azụ ụlọ! Classic tube Garden Bird feeder dị ukwuu n'ihi na-adọta nta nnụnụ dị ka finches, chickadees, titmice, nuthatches, junocs na ndị ọzọ! na Bird feederbụ a oké onyinye echiche ndị nne na nna, ọdịdị hụrụ na ụmụaka. Ịnọgide Na-enwe feeder site n'ịhụ na ọ na-akwakọba na-aghọ onye na-atọ ụtọ ọrụ that`s oké nke na-edebe agadi ọrụ n'aka ma ọ bụ na-ezi na-eto eto responsibility.The mmetụta nke ọṅụ na afọ ojuju nke na-abịa site udia agụụ na-agụ anụmanụ dị oké ọnụ ahịa.
Bird feeder Quality
- Premium ọkwa ike plastic ga-gị na osisi enem.
- atọ fedding ụgbọ-enye ohere maka multiple nnụnụ na-eri nri n'otu oge.
- nchọ nkpuru ụlọ na-eme ruo 4 iko nke osisi ọhụrụ na akọrọ-egbochi moldi buildup nke bụ na-emerụ maka nnụnụ.
- Clear ụlọ na-ahapụ gị hụ mgbe it`s oge mejupụta osisi.
Nanị bilie n'elu mkpuchi na mejupụta.
- Contoured isi ana achi achi na osisi na-na-ekesa kwupụta elu mgbidi.
-Achọ ezigbo Plastic Bird feeder Manufacturer & soplaya? Anyị nwere a dum nhọrọ nke na-ahịa na-enyere gị na-okike. All ndị tube Bird feeder bụ àgwà na-ekwe nkwa. Anyị bụ ndị China Mmalite Factory nke Garden Bird feeder. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Next: Plastic Gardening Tools Nịm maka Kids